Shaqo tayo leh
Boos ilmahaaga u dalbo
Nidaam cusub ee dalabka booska
Magaalada Stockholm waxay soo saaraysaa nidaam cusub oo lagu dalbado xannaanooyinka. Gal halkan Min barnomsorg
Waxbarasho xiiso leh
nabadgelyo iyo madadaalo
Waxaan la wadaago qiyamka in isku wada raacsan yahay oo ku saabsan. Qiyamka Kuwaas waxaa qoto dheer ugu qotomaan barayaasha ah. Mid ka mid ah gool ugu wayn ay tahay in ay soo aadanaha, waxa ixtiraam, midnimada iyo qiyamka dimoqraadiga ah oo ku saabsan in carruurta ee xannaanada iyo barbaarinta carruurta.
Luuqado kaladuwan iyo bulsho Isdhexgal
Luqaddu waa fure
Waxaan si firfircoon uga shaqeeya inay la kulmaan ilmaha ee heer ay ku jiraan luqadda iyo bulshada ay, dhaqdhaqaaqa iyo caqliga. Waxaanu ku kicin dheeraad ah oo ku salaysan iyaga u gaar ah xirfadaha, danahooda iyo kartidooda. Carruurta qaba baahiyaha gaarka ah si ay si gaar ah, oo mara khayraadka u gaarka ah ama kaliya waxa ilmuhu u baahan yahay, sida luqad dheeraad ah shisheeye, aqoonyahan luqada ama taageero iyo caawimaad ka BVC.
Luuqado kaladuwan iyo Isdhexgalka
Luqadda waa in ay helaan
Carruurta ayaa inta badan, Somali afkooda koowaad yahay, sidaas daraadeed waxa la hadlay iyo sidoo kale Somali Swedish at naga xannaanada (ku xiran da'da ah ee horumarka luqadda ilmahaaga iyo). Carruurta Our kale oo ay leeyihiin Carabi sida afkooda hooyo iyo shaqaalaha ka badan 15 luqadood ku hadla.
daryeelkaee caruurta ku
Vi söker förskollärare, speciallärare och elevassistenter. Välkommen med ... Read More
Dayactirid iyo casriyeen ayaa ku socda bogga. ... Read More
Subscribe Our Warsidaha
Tani waa map fudud qoraalka Tani waa map fudud qoraalka Tani waa map fudud qoraalka Tani waa map fudud qoraalka
Play iyo Baro
© 2015 Pre-School . All rights reserved.